FANADIHADIANA MANOKANA. FANIRY RAZAFIMANATANY : «Biraom-pandatsaham-bato 6 000 izay tsy misy akory” | Madatopinfo
FANADIHADIANA MANOKANA. FANIRY RAZAFIMANATANY : «Biraom-pandatsaham-bato 6 000 izay tsy misy akory”
Ahiahy tsy ihavanana! Raha nanaovana fanadihadiana manokana ny Sekretera Jeneralin’ny VMMF, Faniry Razafimanatany, tsy nihambahamba izy nanatsikafona fa mandeha ny resaka mikasika ilay biraom-pandatsaham-bato 6 000 foronina kanefa tsy hisy akory. Ny fanorenana ifotony sy ny fampihavanam-pirenena ary ny fifampiresahana nasionaly no fanalahidin’ny krizy ankehitriny ho an’ny Vovonana Malagasy Manarina ny Firenena .
Mpanao gazetin’i Madatopinfo na MTI : “Amin’ny maha-mpitaritona kalaza anao teny amin’ny kianjan’ny 13 Mey raha mbola tsy nisy nahasahy an’izany tamin’ny fotoana androny, ahoana ny hevitrao mikasika ilay biraom-pandatsahambato vaovao mananika ny 6 000?”
Faniry Razafimanatany na FR : “Eo amin’ny 6 000 eo eo ny Biraom-pifidianana aneritreritra. Biraom-pandatsahambato izay tsy misy akory ka mahabe ady hevitra amin’izao fotoana izao. Ny zotram-pifidianana amin’ny ankapobeny mihitsy no ahiana hiteraka krizy hafa. Iaraha-mahita fa ny lalam-pifidianana izay nampifanditra no entina hanatanterahana fifidianana, satria efa samy naka ny refiny mety avy azy ny antoko matanjaka. Lalàna tokony mbola naverina nodinihina dia navoakan’ny Filoha ankehitriny ary nanaiky hiara-hitantana ao ihany ireo nanda izany ny tolon’ny 21 Aprily izay namoizan ain’olona. Ny lisim-pifidianana, ny karam-pifidianana ihany koa mbola manjavozavo tanteraka. Ny HCC milaza fa hatao maintany ny Fifidianana, ny Governemanta nanambara fa amin’ny volana Desambra ny fihodinana faharoa. Mipetraka ho olana, na araky ny lalàna na araka ny zavamisy ny fifidianana anaty fotoam-pahavaratra.
MTI : Mino ny hala-bato ve enao sy ny VMMF?
FR : “Ny olana politika teto amin’ny Nosy hatrizay dia tsy nisy afatsy fifidianana. Tsy nitondra tombotsoa fa fatiantoka aza no hita tamin’ny fanaovana fifidianana anaty disadisa toy izao. Izay no mahatonga ny Vovonana Malagasy Manarina ny Firenena na VMMF milaza fa ahiana hampitombo ny hala-bato ny fanatanterahana ity fifidianana ity. Na ny fitanterana, na ny serasera, na ny olombelona dia mboal tsy vonona ho amin’izany anaty rotsak’orana io. Mety amin’io fifidianana io ny ahemotra mba hisian’ny fifampiresahana nasionaly, ka hisian’ny fampihavanana tena izy, ny fanorenana ifotony, ny fifanarahan’ny samy mpanao politika ary ny datim-pifidianana eken’ny rehetra fa tsy antoko vitsy izay miara-mitantana ankehitriny ihany mba ho mendrika ny maha-tany repoblikanina an’i Madagasikara. Tokony hiray hina ny mpanorina ifotony ary anisan’ny mazoto amin’izany fiombonana izany ny VMMF”
MTI : Voapanga ho mpikaraman’adin’ny mpitondra ankehitriny ianareo mitaky ny fanorenana ifotony mba hampateza ny fitondrana izay mijoro. Ekenareo ve izany?
FR : “Ny tokony ho fantatry ny vahoaka dia amin’ny vanimpotoana rehetra dia tsy maintsy misy zavatra miseho ka miankina amin’izay ny fitenenana. Mahita ny zava-mitranga iainan’ny vahoaka Malagasy amin’izao fotoana izao, dia hita fa tena sahirana. Nanomboka ny 21 Aprily farany teo iny dia tsikaritra fa nisy tranga vaovao teo amin’ny tantaran’i Madagasikara. Olana mikasika ny lalam-pifidianana dia niafara tamin’ny fahafatesan’olona teo amin’ny tolona ankianja, niditra fanapahan-kevitry ny HCC, ny fifampiresahan’ny mpanao politika, niafara tamin’ny fananganana Governemanta. Tsotra fotsiny ny hevitray na inona lazaina fa zava-baovao, izahay hatramin’izay efa niteny foana fa lakilen’ny fivoahan’i Nosy amin’ny krizy ny fanatanterahana ny fampihavanam-pirenena sy ny fanorenana ifotony vao afaka manatanteraka fifidianana. Ny antony efa tsapanay mialoha tokoa izao tranga maharary amin’ny Firenena izao.”
MTI : Azona faritana ve ny atao hoe : “fanorenana ifotony” fa ny samy mpanorina ifotony aza toa tsy mifankahazo hevitra ka tsy nahatarika olona amin’izao fotoana izao eny amin’ny 13 Mey?
FR : “Ny fanorenana ifotony izay fandrafetana ny Firenena indray dia endrika fitiavan-tanindrazana izany. Tsy afa-miala amin’ny lalam-panorenana anefa izany amin’ny fitondrana ara-demokratika toy izao, izay mifehy ny politika sy ny lalàna samihafa eto amin’ny Firenena. Io lalam-panorenana io no tsy maintsy omena fototra tsara vao milamina ny ezaka hafa rehetra. Ekena fa marefo ny demokrasia eto Madagasikara, tahaka ny fomba fanehoan-kevitra ohatra, fa ny lalana fototra ihany no mampijoro izany sy hampandroso ny Tanindrazana. Io lalampanorenana vaorafitra araka ny tena izy io no hampirisika ny fampandraisana anjara ny daholobe sy ny antoko politika ary ny firaisamonim-pirenena. Maka ohatra isika mahakasika ny fitsinjaram-pahefana tena izy tahaka ny fokontany, ao amin’ny lalam-panorenana mihitsy no mila hiverenana dinihina. Tsy misy fampandrosoana sy fanmpandraisana andraikitra ny Fokontany amin’izao raha ny lalam-panorenana ankehitriny. Ka azo antoka ny mety hitaran’ny krizy.”
Marihina fa raha nanontanian’ny mpanao gazety mahakasika ny fanitarana io Birao-pifidianana izay lazaina fa tsy misy io anefa ny CENI tamboninandro dia namaritra fa miankina amin’ny entimanana no hisian’izany na tsy, satria ny lalam-pifidianana amin’izao izay nampihena ny tokony handatsabato anaty birao iray no nampihitatra ny toerana hanaovana ny latsabato. Anisan’ny mampihena ny taham-pahavitrian’ny mpifidy amin’ny fifidianana ny fomba fa efa vita mialohan’ny fotoana ny fifidianana. Araka ny loharanom-baovao azo antoka iray dia diso fikitika ny milina avo lenta mikasika ny valim-pifidianana ho avy ny teknisianina iray ka efa hita tao sahady ny valim-pifidianana. Mitodika amin’ny firaisamonim-pirenena sy ny rafitra miady amin’ny kolikoly hijery akaiky izany ho mariky ny fitiavan-tanidrazana. Raha ts’izany dia heverina ho vakiraoka fotsiny ihany izany fa tsy ilay valim-pifidianana tena izy. Tokony hanao ady sisika sy fitsirihina amin’ny fitaovana avo lent any firaisamonim-pirenena fa tsy variana mitsikera ny hita ety ivelany fotsiny.